News Archives - Nalapani
रुपन्देहीका सडकमा राखिएका पाँच वटा वुद्ध मुर्ति तोडफोड
आखिर किन दोषी को ! तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुद्धका मूर्ति तोडफोड (फोटो फिचर)
बुटवल– रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गमा राखिएका वुद्ध भगवानका मुर्ति तोडफोड गरिएको छ । बिहीवार विहान मुर्ति तोडफोड अवस्थामा फेला परेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरका बासुदेव घिमिरेले बताए । मेयर घिमिरेका अनुसार मुर्ति तोडफोड गर्नेहरुको खोजी भइरहेको जनाए । रुपन्देहीको सिक्सलेन सडकको शंकरनगर चोकदेखि नयामिलसम्म रहेका ५ वटा बुद्धमूर्ति तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको… Read More »
बुटवल — रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गमा राखेका बुद्घ मूर्तिहरू तोडफोड भएको छ । सिक्सलेन सडकको शंकरनगर चोकदेखि नयाामिलसम्म रहेका ५ वटा बुद्धमूर्तिमा तोडफोड भएको हो । बुधबार साँझसम्म साविक अवस्थामा रहेका मूर्ति बिहान तोडफोड भएको नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए। मूर्ति कसले किन तोडेको हो भन्नेबारे पत्ता लागेको छैन। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी टोलीले अध्यययन सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी… Read More »
Shilpa Pokhrel,arenowned Nepali film actress, has filedapolice compliant against her husband Chhabi Raj Ojha and has demanded her security following ‘multiple physical assaults’ by Ojha in the past few months. Pokhrel had filed an FIR against Ojha, who isapopular Nepali filmmaker, at Metropolitan Police Range, Teku, on July 7.Samjhana Rouniyar, sister-in-law and… Read More »